200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Safaaradda Mareykanka ee magaalada Naiorbi ayaa maanta uu jimco ah la xiray | UfeynNews.com
Oct 29, 2016 - jawaab
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Naiorbi ayaa maanta uu jimco ah la xiray, maalin kaddib markii banaanka Safaaradda lagu toogtay nin middi ku dhaawacay askari boolis ah.
War ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa lagu sheegay in maanta oo ah 28 October Safaaradda la xiray, iyadoo la joojiyay adeegyadii Qunsuliyada, balse adeegyada deg deg ah ee ay u baahan yihiin muwaadiniinta Mareykanka in la heli karo.
Safaaradda ayaa sheegtay in Safaaradda xirnaan doonto ilaa 31 bishan, waxaana tilmaamtay in aanay jirin waxyeelo shaqaalaheeda iyo muwaadiniin Mareykan ka soo gaaray dhacdadii shalay.
Ninka midida ku hubeysnaa ayaa isku dayay inuu xoog ku galo safaaradda, sida ay sheegayaan warbaahinta Kenya, balse waxaa toogtay mid ka mid ah ilaalada Safaaradda.
Booliska Kenya ayaa wali wax faah faahin rasmi ah ka bixin dhacdadii shalay, inkastoo ninka la sheegay inuu midida ku hubeysnaa uu ahaa Soomaali ka soo jeeda magaalada Wajer ee Gobolka Waqooyi bari Kenya.
Ninka ay toogteen Ilaalada Safaaradda ayaa da’diisa lagu qiyaasay 20-jir, waxaana socda baaritaano dhacdadii ka dhacday banaanka Safaaradda.